Caddaaladdu waa mid ka mid ah afarta qiyam ee aasaasiga u ah 'McKnight Foundation's' Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah. Waa qiimo aan nafteenna ugu tartanno sidii aan u taageeri lahayn siyaasadahayaga gudaha iyo wax-qabadkeenna, waana qiime innaga hagaya annaga oo qiyaasaya isbedelka aan rabno inaan ku aragno bulshada ballaaran. Qiimahaan aadka loo haystay ayaa hadda carqaladeyn doona sameynta barnaamij cusub oo diiradda lagu saarayo sidii loo horumarin lahaa caddaalad iyo caddaalad loo dhan yahay oo Minnesota ah. Hadafka: U dhis mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal.
Si loo dhiso mustaqbalkan firfircoon, barnaamijkan cusub wuxuu sharfi doonaa oo ku dhisan doonaa wixii aan & #8217; ee aan ka baranay shaqada aan & #8217; ka taageernay bulshada dhexdeeda sannado badan annagoo u sameynayna boos fikradaha cusub. Marka kuwa taariikh ahaan laga soo saaray ay wax fiican qabtaan, qof kasta oo reer Minnesota ah ayaa faa'iido leh. Ganacsiga, bulshada, iyo hogaamiyaasha dawladu waa ay yaqaanaan, iyo cilmi baarisyo muujinaya, in gaarista sinaanta ay xoojineyso jiritaanka bulshada, dhaqanka, iyo dhaqaalaha gobolka. Waxay xoojineysaa shaqaalaheena, waxay hubineysaa in shirkadaha maxalliga ah ay ku tartami karaan dhaqaalaha adduunka, waxayna sare u qaadeysaa tayada nolosha ee dhammaan bulshooyinka.
Markii aan bilaabeynay dhisidda barnaamijkan cusub, ma jiri doonno wareegyo codsi bilow ah oo mustaqbal ah midkoodna Gobolka & Bulshada ama barnaamijka waxbarashada. Waxaan rajeyneynaa inaan ku dhawaaqno tilmaamaha barnaamijka cusub ee 'Vibrant & Justice' ee deyrta ee 2020, oo waqtigaas deeq-bixiyeyaasha ku habboon shuruudaha laga dalban karo maaliyad cusub.
Hoos waxaa ku yaal xoogaa macluumaad ah oo sharaxaya sida aan uga fekereyno barnaamijkena cusub ee bulshada sida uu u kobcayo.
Waxbadan ka baro Balanteenna cusub in la dhiso beello loo wada dhan yahay oo loo wada dhan yahay ee Minnesota.
Markii aan horumarinay xeeladaha qaabeeya barnaamijkan cusub, waxaan eegi doonaa wixii ka dambeeya derbiyadayada aasaasiga ah waxaanan ku casuumi doonnaa fikradaha bulshada. Baro sida.
Aagagga Diiradda Bulshada
Barnaamijka cusubi wuxuu diiradda saari doonaa kor u qaadista dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, hormarinta hormarinta sinaanta, iyo kordhinta ka qeyb qaadashada bulshada.
Akhrinta Lagu taliyay
Kheyraadka soo socdaa waxay gacan ka geysteen in aan sheegno fikirkayaga
Tani Maqaalka Dib-u-eegidda Bulshadda ee Stanford ka Angela Glover Blackwell of SiyaasaddaLink waxay muujineysaa sida maal gelinta ee hal koox ay u wanaajin karto wanaagga guud ee ummada.
Codadka ka socda Goob-jooga: Qaban-qaabiyaasha Miyiga wixii ay uga baahan yihiin maal-galiyayaasha
Tani Sawirka waxaa siidaayay Naadiyada Xaafadaha wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay bulshooyinka reer miyiga ah iyo kuwa magaalooyinka yaryar ee ku saabsan dhisida awooda iyo abaabulka.
Berrito Minnesota: Sinnaantu waa Model Kobaca Sare
Tani Warbixinta PolicyLink waxay dukumiinti ka dhigaysaa isbeddelada tirakoobka ee Minnesota waxayna muujineysaa sida siyaasadaha sinnaanta ay uga faa'iideysan karaan dhaqaalaheena gobolka.
Dhamaan Dadka, Dhamaan Goobaha: Dhul Fiiri Fursad Loogu Tala Galay Iskuxirka Dadka Reer Miyiga iyo Magaalada
Tani warbixin ka socota hay'adda 'Global Global Fund' wuxuu baarayaa dareenka ka dhex jira maal-galiyayaasha iyo u doodayaasha ku saabsan kala qaybsanaanta baahsan ee u dhexeeya miyiga iyo magaalooyinka Mareykanka.
Jawiga & Sinnaanta Bulshooyinka Wararka, Fikradaha, iyo Kheyraadka
By Neeraj Mehta Juun 2020